How to Play Video on TV from USB Pen Driver | OS-ụlọ ahịa Blog
June 17, 2019 ecommerce Electronics, OS-ụlọ ahịa, Ndị ọzọ, ngwaahịa, Technology 0
Ọ bụghị nanị na-eche na n'ihi na telivishọn nwere a USB n'ọdụ ụgbọ mmiri, o nwere ike ịrụ faịlụ site na a Pen Driver. Na ụfọdụ ikpe na ọdụ ụgbọ mmiri na-nanị e mere maka site na injinia na-mkpa na-agba ọsọ software na telivishọn, ọmụmaatụ, imelite ma ọ bụ ịrụzi set. Ụfọdụ tent pụrụ nanị na-enwe ike iji gosipụta video faịlụ ozugbo ị nyeere otu nhọrọ na a ọrụ menu na-adịghị na eze n'ihu ọha-ejere; na-elekọta ndị dị otú ahụ menus dị ka ị pụrụ isi metụta TV ịrụ ọrụ site na-agbanwe agbanwe ọrụ menu ntọala.
Tupu ijikọ na ngwaọrụ gị na TV, biko ndabere gị faịlụ iji gbochie ha mebiri ma ọ bụ ọnwụ nke data
Amalite jikọọ Mpụga Device (USB Nchekwa) >>>
Mgbe a USB na ngwaọrụ na jikọọ na USB n'ọdụ ụgbọ mmiri, a mmapụta ozi ga-apụta ikwe gị mfe ịgbanwee media ọdịnaya echekwara na USB na ngwaọrụ.
2. Pịa Home button na gị Smart Control, iji nweta Home Screen.
3. Pịa HOME button na gị na n'ime ime obodo, ịnyagharịa Source na họrọ USB Device / ejikọrọ Device
4. Họrọ faịlụ na ị chọrọ igwu na TV
Ọ bụrụ na gị na TV na-eme nkwado video playback si Pen Driver, isi ihe na-akpata na-emetụta gị ike na-ekiri a akpan akpan video bụ faịlụ format. Ị ga mkpa gakwuru onye ọrụ ntuziaka ma ọ bụ nkwado ihe maka akpan akpan set ịhụ nke Ụdị ọ na-akwado. Formats nke na-akwado na ọtụtụ tent gụnyere MPG, MP4, DivX, XviD, WMA, na AVI, ezie na ọ bụ nkịtị maka otu set na-akwado naanị ụfọdụ nke a ndepụta. Formats nke na-ọzọ na-adịkarịghị na-akwado na-agụnye MKV (mee mgbe mgbe maka nkekọrịta elu-definition content online), VOB (faịlụ ji na DVD) na 3GPP (a format eji na okenye cellphones na video ese foto). Ụfọdụ tent ga naanị igwuri egwu, a video na a na-akwado format ma ọ bụrụ na ọ bụ na a kpọmkwem mkpebi ma ọ bụ n'ime otu nso nke amuma. All ndị a na-agaghị emeli pụtara pụrụ ịdị gị mkpa iji tọghata ma ọ bụ re-encode ụfọdụ video faịlụ na-ekiri ha site Pen Driver na gị akpan akpan set.
-Enweta ihe ọmụma – Pịa ebe a
processors Technology_Internet iwu nkọwa HTC 64-bit Windows software Public Nzube ngwaọrụ Model Ekwentị mkpanaka CPU ihe Njikwa Ngwaọrụ Series Driver Support HD Graphics ọkwọ ụgbọala nkwado Nokia Intel Technology Samsung processor OS-ụlọ ahịa
Nokia CPU Sony Ericsson Technology_Internet Technology HTC Samsung Galaxy 64-bit Windows iwu nkọwa ngwaọrụ Model ọkwọ ụgbọala nkwado processor Ekwentị mkpanaka smartphones processors Series Driver Support Intel ihe Njikwa Ngwaọrụ Qualcomm Samsung software HD Graphics Public Nzube Intel Server OS-ụlọ ahịa